့ မြန်မာနိုင်ငံ ၈၈ အရေးအခင်းကို နောက်ခံထားပြီး ရို...
Facebook တွင် ဓာတ်ပုံတင်သူများ သတိထားပါ - Facebook...
ဒို့ ဗိုချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ လေးကိုဂုဏ်ပြုအလေးပြုကြရအော...
Internet Download Manager ကို Patch မသုံးပဲ full v...
6:42 pm | Labels: နည်းပညာ
wifi ဟက်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်......
TEST wifislax-4.8-rc5 CASI VERSION FINAL ဆော့ဝဲလေးရဲ့နာမည်ပါအောက်ကလင်လေးကလေဒေါင်းလိုက်နော်။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
descarga –>> http://www.downloadwireless.net/isos-fase-testing/wifislax-current/wifislax-4.8-rc5.iso
md5 –>> cf282053490fc25dd31a33b6d9e41a12
အပေါ်ကဆော့ဝဲက်ုဒေါင်းပြီရင်ခဏသိမ်းထားလိုက်ပါ........အဲဆော့ဝဲကို run လို့ ရအောင်သူရဲ့ rader လေးကို အောက်ကလင့်ကနေထက်ဒေါင်းလိုက်ပါအုံးနော်......................
ကဲ၂ခုလုံးဒေါင်းပြီးရင်တော့အောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်ကြနော်၊၊ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။
့ မြန်မာနိုင်ငံ ၈၈ အရေးအခင်းကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။
6:45 am | Labels: ဗဟုသုတ, ဗွီဒီယို
၁၉၉၅ ခုနှစ်က ဒါရိုက်တာ John Boorman ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၈၈ အရေးအခင်းကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ Rated(Political oppression) ဇာတ်ကားပါ။
Patricia Arquette, U Aung Ko နဲ့ Frances McDormand တို့က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားပြီး မြန်မာယိုးဒယားနယ်စပ်မှာ လာရောက်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကို ကျနော်ကလွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်လောက်က အကိုတစ်ယောက်ဆီက ရပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကြည့်ခဲ့ရပေမယ့် ဇာတ်ကားနာမည်ကို လုံးလုံးကိုမေ့နေလို့ သူငယ်ချင်းတို့ကို တင်ပေးချင်ပေမယ့် ရှာဖွေလို့မရ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ Movie Crazies ရဲ့ အကူအညီကြောင့် ဇာတ်ကားနာမည် ပြန်လည်သိရှိရပြီး သူငယ်ချင်းတို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Laura ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းသည် နဲ့ ကလေးကို ဆုံးရှုံးရပြီးနောက်ပိုင်း စိတ်ပြေလက်ပြောက်ရှိအောင် ဆိုပြီးသူမရဲ့ အမနဲ့အတူ ဗမာပြည်ကို အလည်အပတ်လိုက်ခဲ့တာပါ။
သူတို့ ဗမာပြည်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာပဲ အရေးအခင်းဖြစ်မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။သူတို့လူစုဟာ အားခြင်းပြန်လည် ထွက်ခွာဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် Laura ရဲ့ Passport ပျောက်ဆုံးနေလို့ သူမတစ်ယောက်တည်း ဗမာပြည်မှာ ကျန်နေယစ်ခဲ့တာပါ။
Laura ဟာကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ကို နဲ့ သိရှိခဲ့ပြီး သူမကိုယ်တိုင် အရေးအခင်းထဲ ပါလို့ပါမှန်းမသိပဲ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
Laura ဟာ Passport မရှိတော့တာကြောင့် ဦးအောင်ကိုတို့ ကျောင်းသားအဖွဲ့နဲ့ ယိုးဒယားဒုက္ခသည်စခန်းကို အခက်အခဲတွေကြားကနေ ဘယ်လိုထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်အောင် ပြေးမလဲဆိုတာကတော့.........
Facebook တွင် ဓာတ်ပုံတင်သူများ သတိထားပါ - Facebook သုံးသူတိုင်းဖတ်ရန်
8:17 pm | Labels: မှတ်သားစရာ, သတင်း
ဒီ ရက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လောက် Facebook သုံး ရင်း ပြဿနာတစ်ခု တက်ကြတယ်ဗျ။ အဲ့ ပြဿနာကလည်း အကြီးကြီးနော် .. ဂုဏ်သိက္ခာကို တော်တော် ထိခိုက်စေတယ်ဗျ။ အဲဒါ ဘာ ပြဿနာလည်းဆိုတော့..ဒီလိုဗျ..ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေက သူ့တို့လည်း Facebook သုံးတဲ့သူတွေ လုပ်နေကြ သဘာဝအတိုင်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက် .. ကိုယ့် ရဲ့ Friends တွေကို tag တွေထိုး …ပုံတွေကို share ကြတာပေ့ါ… အဲသူတို့ရဲ့ ph နံပတ်တွေကိုလည်း တစ်နေရာရာမှာ share လိုက်တာတို့ …တင်လိုက်တာတို့ ..လုပ်မိတယ်ထင်တယ်ဗျ…အဲမှာစတာပဲဗျာ…
ဘယ်သူကမှန်းမသိ page တစ်ခုထောင်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ပုံတွေကို သူတို့ရဲ့ profile ကနေပြီး download လုပ် သူ့ရဲ့ page မှာတင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ph နံပါတ်ကိုလည်း သူ့ရဲ့ page မှာတင်ပြီး….မကောင်းတာတွေ လျှောက်လုပ်ပါလေရော…အဲဒီ့ နှမချင်းမစာနာကောင်က သူ့ရဲ့ page ကို ပြည့်တန်ဆာ page လိုမျိုး လုပ်ထား…ပြီးတော့ ကျွန်တော့် friend မိန်းကလေးရဲ့ နံမည်..ဖုန်းနံပါတ်တွေတင်…ပုံတွေတင်…လျှောက် share တော့…သေရော…ကျွန်တော့် Friend ကို ဖုန်းတွေ ဆက်ပါလေရော…တစ်နေ့ကို ဖုန်း ၁၀ ခါပဲ ဆက်ပါဦးဗျာ…ခံရတဲ့ ကာယကံရှင်က ဘယ်လိုနေမလဲ…လုပ်တဲ့သူကလည်း ဘယ်သူမှန်းမသိ…တိုင်လို့လည်းမရ…ပြီးတော့ ဆက်တဲ့ ph ကလည်း အကောင်းပြောမယ့်သူတွေ ဆက်တဲ့ ဖုန်းမဟုတ်တော့ ခံရတဲ့သူက တော်တော်ခံရတယ်ဗျ…ဂုဏ်သိက္ခာလည်း တော်တော်ထိခိုက်သွားပြီ….မသိတဲ့သူတွေကတော့ …ကျွန်တော့် firend ကို တစ်မျိုးထင်ကြတော့မယ်ဗျ…
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာက Facebook မှာ account name ကို တူအောင်ပေးလို့ရတယ်ဗျ….ဥပမာ နံမည်တစ်ခုကို ရှာလိုက်ဗျာ …အဲ့နံမည်နဲ့ account တွေအများကြီး ထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျ.. ကဲဒီတော့ friend တို့ကို မကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့သူက friend တို့ နံမည်နဲ့ account လုပ်လိုက်မယ်ပဲထား…ပုံတွေကိုလည်း friend profile ကနေပြီး download လုပ်ပြီးပြန်ထည့်မယ်ဗျာ…ပြီးရင် အဲ့ account နဲ့ မကောင်းတဲ့ page တွေကို like လုပ်မယ်…မဟုတ်တဲ့ status တွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်…ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ… ဘယ်မှလည်းတိုင်လို့မရ… ဘယ်သူမှန်းလဲမသိ…..
အဲလိုမျိုး ကြုံလာမှာဆိုးလို့ Friend တို့ကို သတိပေးချင်လို့ ဒါလေးကို ရေးလိုက်တာပါဗျာ….ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်လို့…စကားပုံတောင်ရှိတယ်မလား…အဲတော့ ဒီလိုမျိုး မကြုံရအောင်..ကိုယ့်ကို Friend request လာလုပ်ထားရင် သူ့ရဲ့ profile ကို သေချာစစ်..ဘယ်သူလဲသိမှ လက်ခံပေါ့နော်…ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကိုထိခိုက်နိုင်မယ့်…status တွေမတင်မိစေနဲ့ပေါ့နော်…ဥပမာ..ဖုန်းနံပါတ်တို့ လိပ်စာတို့ပေါ့…. Chat box တွေမှာလည်း ကိုတစ်ကယ် မသိရင် မပြောတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ….တစ်ကယ်လို့ အဲလိုမျိုး အလုပ်ခံရမယ်ဆိုရင်…Facebook ကို report တင်လို့တော့ရတယ်ဗျ..အဲ့ account က ဒီလိုလုပ်နေပါတယ်လို့…. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ Facebook က သူ့ကို လုပ်တဲ့ account ကို block လုပ်ပေးလိုက်လို့ သက်သာရာရသွားတယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့လို့မျိုး Facebook က block ပေးတာက percent တော်တော်နည်းတယ်ဗျ… ကဲ Friend တို့ တစ်ခြား
Friend တွေကိုလည်း သိရအောင် share ပေးပါနော်..
အားလုံးပဲ Facebook မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေနော်…
PC တွေ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ AceByte Utilties Pro v3.1.2 + Crack
4:54 pm | Labels: နည်းပညာ
PC တစ်လုံးမှာ Optimizer တစ်ခုတော့ ထားသင့်ပါတယ်..
ဖိုင်တွေ အကူးအပြောင်းဖြစ်စေ..Uninstall လုပ်သည်ဖြစ်စေ..အမှိုက်တွေ ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်..
အဲ့လို မျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စက်က လိပ်သံခြေချင်း ခတ်သလိုမျိုး.နှေးကွေးနေတာတွေ ကြုံဖူးမှာပါ..
ဒါကြောင့် ဒီ Software ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ASC လိုမျိုး တစ်ခုတည်းနဲ့ တော်တော်စုံတဲ့ Software တစ်ခုပါ..
ဒီဇိုင်းကလည်း တော်တော်လန်းတာကြောင့် ကြိုက်မှာပါ..
မူရင်းဆိုက်မှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်. >>http://www.acebyte.com/download-acebyte-utilities.html
Window 7,8,XP နဲ့ Vista တွေမှာ အလုပ်လုပ် ပါတယ်...
စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျ 16 MB ပျော့ပျော့ လောက်ရှိပါတယ်. :) :v
Download From Mediafire >>> DOWNLOAD
Download From Zippyshare >>>DOWNLOAD
Download From Filehost >>>DOWNLOAD
Download From DropBox >>>>DOWNLOAD
ဒို့ ဗိုချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ လေးကိုဂုဏ်ပြုအလေးပြုကြရအောင်နော်..................
10:13 pm | Labels: မှတ်သားစရာ
ရာဇ၀င်.....အတ္ထုပတိလဲရှိရမယ် မော်ကွန်းလဲထိုးလောက်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဗိုလ်အောင်ဆန်းရယ်....သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးသိကြတယ်နော်....